ओलीकै पक्षमा सर्बोच्च अदालत, यसरी हुदैछ संसद विघटनको सदर ! - Kamana News
ओलीकै पक्षमा सर्बोच्च अदालत, यसरी हुदैछ संसद विघटनको सदर !
काठमाडौं -प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले लगातार उठाइरहेको प्रश्न हो – बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?
यी दुईवटा ९धारा ७६ (१) र (२) अनुसारका प्रधानमन्त्री धारा ७६ (७)को अधिकार प्रयोग गर्न अलरेडी डिस्कनेक्ट भइहाले’ उनले भने ।संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले धारा ७ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने संसदमा दुई वटा पार्टीको बराबर सिट भए के गर्ने भनी प्रश्न गरे । बढी सदस्य भएको दल सधैं रहन सक्छ ? यो अनिवार्य शर्त हो ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ ।
संसदमा दुई पार्टीको सिट संख्या बराबर पनि आउन सक्छ’ उनले भने । राणाले अघि भने, ‘उपधारा ३ त सम्भावनाको ठाउँ राखिएको हो, अनिवार्य त होइन नि ।
त्यसमै प्रधानन्यायाधीश राणाले थपिहाले, ‘मैले यति भन्न खोजेको । लार्जर दल हुनै पर्छ र ? अनिवार्य चाहियो भने त चुनावमै जानुपर्यो । संसदमा ठूलो दलको सम्भावना भयो भने तपाईंले भनेको कुरा हुन्छ । तर सम्भावना भएन भने के गर्ने
पहिलो, टेक्स्ट लिखित रुप नै हेर्नुपर्यो , शब्द के छ त्यही अनुसारको व्याख्या । दोस्रो, संविधानको सिंगो संरचना हेर्नुपर्योे संविधानले के नतिजा दिन खोजेको भन्ने हेर्नुपर्यो ।
तेस्रो, संविधानको उद्देश्य हेर्नुपर्यो ।
विगतमा पटक-पटक संसद विघटन भएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी संविधान जारी गरिएको उनले बताए । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि संसदमा एउटा मात्र ठूलो दल नभएको अवस्थामा के गर्ने भनी प्रश्न गरे ।
ज्ञवालीले भने संविधानमा सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म विघटन नगर्नु भनेको बताए । संसद बलियो होस्, ५ वर्षको कार्यकालभरि टिकोस् भनेर संविधानमा संसद विघटनमा कडा प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि मधेसकेन्द्रित दुई दलको १७र१७ सिट रहेको भन्दै यस्तो अवस्था भएमा अल्पमतको सरकार बन्न नै नसक्ने भन्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र संसदबीच कुनै विवाद नदेखिएको र प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग नै गरेको अवस्थामा विघटन गर्नुपर्ने कारण नै नदेखिएको बताए । ‘साढेको जुधाइ बाच्छाको मिछाइ हुन भएन, पाटीको लडाई भए त्यहीँ सेटल गर्नुपर्योि’ उनले भने ।
बुधवार, माघ ७ २०७७०५:४५:२६
# संसद विघटन # केपी ओली